Kulankii 9-aad ee Golaha Aqalka Sare oo maanta baaqday – Kalfadhi
Kulankii 9-aad ee Golaha Aqalka Sare oo maanta baaqday
Kulanka 9-aad ee Golaha Aqalka Sare, oo ay ahayd inuu dhaco maanta ayaa baaqday. Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa kulankii Sabtidii uga dhawaaqay iney isu soo laaban doonaan Talaadada maanta ah, si ay u meel mariyaan Hindisaha Xeerka Dhismaha Guddiga Ladagaalanka Musuq-maasuqa ee Madaxa-banaan.
Sida uu kulankaas ka faray Guddoomiye Cabdi Xaashi, waxay ahayd inuu Guddiga gacanta ku haaya Hindisaha Xeerka Dhismaha Guddiga Ladagaalanka Musuq-maasuqa ku soo daro Hindisaha aragtidii Senatarada ee kulankii Sabtida, kadibna uu maanta markale hor keeno Golaha, si markale loo marsiiyo aqrintii 3-aad, loona meel mariyo.
Kalfadhi ma ogaan sababta baaqashada kulankaas, hase agaatee waxaa sidaas u xaqiijiyey Xoghaynta Golaha. Inta badan marka uu jiro kulan, waxaa maalinta ka horreysa maalinta kulanka loo diraa Senatarada farriin loogu sheegayo inuu jiro Kulan Gole, iyadoo loo magacaabayo ajandaha kulanka, taas oo aan dhicin shalay, sida ay Kalfadhi u sheegtay Xoghaynta Golaha.
Inta badan wey dhacdaa iney baaqdaan kulamada Baarlamaanka Soomaaliya, iyadoon la ogaan sababta. Hadda, waxaana todobaad ka badan kulmin Golaha Shacabka oo khilaaf ka dhex taagan awgii isugu dambeysay 24-kii bishii hore.
Madaxweyne Gaas iyo Madaxweyne Camey oo isku khilaafsan Doorashada Puntland
Hindisaha Sharciga Hanti-Dhawrka waxaa u harsan meel marin oo kaliya: halkan ka aqriso